यात्रा भाग ६ – aajakoparibesh
परिवेश आजको २०७५ चैत्र ४, सोमबार १८:४३ गते
अत्यन्त परिचीत आवाज , म झसङ्ग भएँ । एकैचोटि १००० भोल्ट को करेन्ट लागेको भान भयो । म एक्कासि अक्मकाए, त्यो आवाज मेरो ठिक पछाडी थियो तर पनि मैले पछाडि फर्केर त्यो आवाज को सामना गर्ने हिम्मत गर्न सकिन।
म एकोहोरो निउरिरहे, सुने नसुने को गर्दै । केहि सेकेन्डको मौनतालाई चिर्दै श्याम जि बोल्नु भयो ;“ ए आइस प्रजोल तँ? कति टाइम लगाको? मैले कुरेको १घन्टा हुन लगिसक्यो। धन्न यी नानी नि साथी कुर्दै रैछिन र साथी भयो तलाई कुरुन्जेल । ” यतिन्जेल प्रजोल मेरो पछाडि नै थियो , उसले मलाई देखेको थिएन । उसको अंकलको कुरा सुनेपछि ऊ “ अ भन्या अलि ढिलो भएछ आज उठनै , ल धन्यवाद है तपाईंलाई” भन्दै मेरो सामुन्ने आयो ।
म भरसक उसको कुरालाई बेवास्ता गर्दै निहुरिरहेकी थिएँ। मलाई देखेर उ पनि आक्कनबक्क भयो । केही बोल्न सकेन। त्यतिकैमा उसको अंकलले अर्को एउटा चिया नि भन्न भ्याइसकेका थिए । अनि प्रजोललाई “ उस्को नाम चाहिँ सृजना रे ” भन्दै चिनाउनु भयो । हामी दुबै चुपचाप नबोली बसेम , के बोल्नु ? बोल्ने कुरा पनि त थिएन ।
आज झन्डै १ बर्ष पछी उसलाई भेटेकि थिएँ । आग्लो कद , हसिलो अनुहार , मिठो बोली , येस्तै थियो उ हेर्दै लोभलाग्दो। अहिले चै झुस्स दारी पालेछ।लामो कपाल अनि घुडामा फाटेको जिन्स , कान मा कालो टप, बिल्कुल भिन्नै मान्छे जस्तो तर अझ पनि उस्तै लोभलाग्दो । मैले नजानिदो पारामा उसलाई नियाल्न भ्याएँ। “खै! तिम्रो साथी त अझै आइन त” …